Mpanamboatra kitapo - Orinasa maloto kitapo, mpamatsy
Kitapo crossbody T-S8136
Kitapo crossbody T-L5191
Kitapo crossboy T-S8113
Kitapo famolavolana Tigernu mahazatra - TIGERNU kitapo duffel 30 taona tsingerintaona
Ity maodely ity dia tsy kitapo fotsiny fa koa kitapo duffel. Ny habeny dia 46 * 16 * 32cm, fahaiza-manao lehibe ary avo lenta. Izy io dia vita amin'ny nylon avo lenta, voaravaka amin'ny hoditra sosona ambony nafarana.
Ny kitapo dia manana efi-trano lehibe iray misy paosy kely sy mpizarazara ao anatiny, manampy amin'ny fitazomana ny zavatrao voalamina tsara.
Ny tahony dia vita amin'ny hoditra, malefaka be ary ahazoana mitondra ary mavesatra ihany koa.
Ity kitapo ity dia tsara amin'ny fiainanao isan'andro, dia lavitra, fitsangantsanganana ary fitsangatsanganana orinasa, mpiara-miasa tsara amin'ny fiainanao.
Kitapo kely T-L5150
TIGERNU fomba telo mampiasa kitapo laptop azo ovaina
Izy io dia kitapo finday azo ovaina miaraka amina fantsona mihamafy sy fehikibo izay mamela azy hampiasaina toy ny kitapo, kitapo soroka na kitapo mpitondra hafatra.
Fahafahana: Ny haben'ny kitapo dia 32 * 27 * 11cm (L * W * H), miaraka amina fantsom-pivarotana finday milentika hatramin'ny 13.1 ″ laptop. Manana paosy sy paosy harato maro ao anatiny izy, tazomy tsara ny zavatra ilaina isan'andro. Ity kitapo ity dia azo sokafana 90 degre miaraka amina fehy roa eo anilany mba hitazonana azy mitsangana mba hampiasanao ny solosainao finday na aiza na aiza.
Kalitao: ny kitapo dia vita amin'ny Oxford, splashproof, anti-triatra ary eco-friendly. -tsy mateza.
Ny fehin-kibo any aoriana dia ahafahanao mametraka ilay kitapo eo amin'ny valizinao mora foana mandritra ny dia ataonao.
Izy io dia kitapo finday vita marika tsara, lamaody ary ilaina amin'ny tanjona, fitsangatsanganana, asa, sekoly, asa, fiainana andavanandro.
Kitapo kely T-L5188
TIGERNU famolavolana kitapo mahazatra mahazatra
Izy io dia volavolan-dalambe vita amin'ny alim-baravarankely 2020 avy any Tigernu, tsotra nefa lamaody ary maoderina
Fitaovana: Izy io dia vita amin'ny splashproof & nylon mahazaka mahatohitra sy ny polyester 210D ho toy ny fisaronana, maharitra sy milamina amin'ny tontolo iainana. Ireo zipera dia manana kalitao avo lenta sy porofo mipoaka, afaka mi-zipper sy mamora mora foana. Ny buckles sy ny kojakoja rehetra dia namboarina tamin'ny logo TIGERNU, avo lenta ary matanjaka.
Size: 43 * 16 * 31cm (L * W * H) .Ny iray dia nasiana efitrano fampiasa laptop 15.6inch niaraka tamin'ny paosy kely maro ho an'ny iPad, karatra fandraharahana, penina, taratasy ary rakitrao. Ny efitrano lehibe iray dia samy manana ny asany. Ny fizarana 3 azo alaina azo zahana indray dia manome fiarovana manokana ho an'ny fakantsarinao manokana. Ao anatiny misy paosy misy harona misy zipper ho an'ny kojakoja, iPad ary takelaka hafa sns. Azo ovaina mora foana izy io ho kitapo kely mahitsy miendrika tanàna amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo mpizara efitrano fakantsary. Mora ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana antoandro, misy toerana malalaka ho an'ny fitaovanao manokana. Mazava ho azy fa ny loko mainty dia azo ampiasaina kokoa amin'ny fampiasana isan'andro.
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/ Tady soroka azo esorina sy azo ovaina. Fahaizana lehibe ho an'ny zavatra ilainao isan'andro.
Misafidiana kitapo Tigernu, mankafiza ny asanao sy ny dia ataonao